इसाइकरणले यसरी फुटाउँदैछ आदिवासी जनजातिलाई - www.sahayatra.com इसाइकरणले यसरी फुटाउँदैछ आदिवासी जनजातिलाई - www.sahayatra.com
Home > samachar > इसाइकरणले यसरी फुटाउँदैछ आदिवासी जनजातिलाई
इसाइकरणले यसरी फुटाउँदैछ आदिवासी जनजातिलाई
सन्दर्भ : पहिचान भर्सेज धर्मनिरपेक्षता
आज नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका बारेमा विभिन्न कोेणबाट बहसहरू भइरहेका छन् । हिजो बेलायतमा होलोयकले सेकुलरिज्मको ब्याख्या गर्दा उनलाई त्यहाँको प्रशासनले कैद गर्‍यो । इसाईहरूले उनलाई जिउँदै जलाउन खोजे । तर, आज उनैको सेकुलरिज्मको परिभाषाभित्र धर्मको विषय नितान्त व्यक्तिगत हो भन्ने बुझाइ विकसित भइरहेको छ ।
हाम्रो देशमा यस्तो अवस्थामा कुनै पनि समुदाय, व्यक्तिले तुरुन्त धर्म परिवर्तन गर्न सक्ने र धर्म परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारको कानूनी मान्यताको विकास हुन गइरहेको बुझाइ पनि छ । यस्तो अवस्थामा इसाई धर्मालम्वीहरूको संख्या बढ्ने पनि निश्चित छ । इसाई धर्मालम्वीहरूको संख्या बढ्दा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति समूहहरूबाट त्यसमा सहभागी हुनेछन् ।
यस्तो हुनमा पहिलो कुरा त आदिवासी जनजातिका परम्परा संस्कारहरू धर्मका रूपमा विकसित हुन सकेका छैन ।
दोस्रो, आदिवासी जनजातिहरू आर्थिकरूपमा दुर्बल छन् । पाप र धर्म भन्दा पनि उनीहरूलाई पेटपालो गराए पुग्ने इसाइहरूले बुझेका छन् ।
तेस्रो कुरा, आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू हिन्दू धर्मालम्वी शासक वर्गहरूका विपक्षमा उभिएका छन् । यस्तो उपल्लो जातिका सभ्रान्तहरूले आफ्नो धर्म, संस्कार जोगाउन आफ्ना सनातनी संस्कारलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने कि कानुनी सहायता लिने उनीहरू संकटमा परेका छन् ।
धर्मनिरपेक्षता के हो ?
धर्मनिरपेक्षताको अर्थ “सेकुलर” लाग्ने गर्छ । सेकुलर शब्द ल्याटिन शब्दको “सेकुलम” बाट अंग्रेजीमा आएको हो ।
बेलायती नागरिक जर्ज जेकोब हेलियोकले सन् १८४६ मा कुनै पनि मानिसको विचार स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जोड दिँदै सेकुलर शब्दको कोइन गरेका थिए । उनी रिजनर पत्रिकाका सम्पादक थिए । स्वतन्त्र विचार र ईश्वरीय निन्दाको वकालत गर्ने उनी सामाजिकर्मी थिए । उनी फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिबाट प्रभावित थिए ।
इसाई धर्ममा लागेका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो परम्परा, संस्कार र संस्कृति पुरै त्यागेका छन् । आदिवासी जनजातिहरूको सनातनी संस्कारमा फाटो ल्याएका छन्
फ्रान्समा सन् १७८९-१७९१ मा पहिलो संविधान बन्दा ताका राज्यबाट चर्चलाई अलग गरियो । अथवा त्यहाँ राज्यलाई धर्म किन चाहियो भन्ने मान्यताको विकास गरियो । सेकुलर शब्दको राजनीतिक अर्थले राज्यबाट धार्मिक संस्थाहरू अलग्गिनु पर्ने मान्यता राख्छ । कानूनका अगाडी विभिन्न आस्था बोकेका र धार्मिक समुदायहरूमा सबै समान हुन भन्ने मान्यता राख्छ ।
फ्रान्समा राज्यबाट चर्च अलग्गिनु भारतमा कानूनका आधारमा मुुसलमान, हिन्दू समान हुन भन्ने मान्यता भित्र हामीले धर्मनिरपेक्षताको अर्थ खोज्नुपर्ने बुझिन्छ ।
पहिचान के हो ?
जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र ऐतिहासिकताका आधारमा कुनै पनि जाति चिनिनु जातीय पहिचान हो । कुनै जाति वा व्यक्तिको पहिचान राज्यसँग जोडिएमा त्यसले त्यो जातिले वा व्यक्तिले अपनत्वको महसुुुस चाँडै गर्छ । वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा प्रत्येक जाति, समुदाय आफ्नो पहिचान राज्यसँग जोड्न चाहन्छन् ।
के इसाईहरूले मात्रै हिन्दूलाई साइजमा ल्याउन सक्छन् ?
केही महिनाअघि इसाई धर्मालम्वी गायिका अञ्जु पन्तले हिन्दू भजन गाउन नमानेकोमा उनका स्रोताहरूले राष्ट्रिय गायिका भएर हिन्दू भजन गाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बौद्ध धर्मालम्बी जनजाति नेता आङकाजी शेर्पाले भने कुनै गीत गाउनु नगाउनु गायिकाको इच्छाको कुरा हो भनेर गायिकाको डिफेन्स गरेका थिए ।
धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी हामीकहाँ फरक-फरक बुझाइ छ । गराई पनि त्यस्तै छ । विशेषगरी आदिवासी जनजातिहरू धर्मनिरपेक्षतालाई धार्मिक सहिष्णुताका हकमा मात्र बुझ्न चाहँदैनन् । बरु हिन्दूहरूलाई इसाईहरूले मात्र साइजमा ल्याउन सक्छन् भन्ने उनीहरूको आग्रह छ ।
इसाइकरणप्रति आदिवासी जनजाति अगुवाहरू एक शब्द नबोल्नुले उनीहरूले भन्ने गरेको पहिचान उनीहरूका लागि मञ्च बन्ने आधार मात्र बनेको छ
वास्तवमा इसाईहरूले ल्याटिन अमेरिकी मात्र मुलुकहरू त के भारतमा नै पनि त्यहाँका आदिवासीहरूलाई इसाई बनाएर उनीहरूका अधिकारहरू स्थापित गराइदिए । आज नागाल्याण्डमा नागाहरूको सनातनी परम्परा “हेरेक्का” को टिपोट मात्र पाइन्छ । नेपालका आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले यस्तो कुरा बुझेका छन् ।
गोष्ठी कार्यक्रमहरूमा पहिचानका कुरा उनीहरूले गरे पनि डलर दिने पनि र आफ्ना अधिकार पनि इसाईहरूले स्थापित गरिदिन्छन् भन्नेमा उनीहरू ढुक्क छन् । त्यसैले उनीहरू पहिचानलाई खोज-अनुसन्धानमा र सांस्कृतिक कार्यक्रमका झलकहरूमा सीमित राख्न चाहन्छन् ।
इसाई धर्ममा लागेका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो परम्परा, संस्कार र संस्कृति पुरै त्यागेका छन् । आदिवासी जनजातिहरूको सनातनी संस्कारमा फाटो ल्याएका छन् । सदियौं वर्षदेखि आदिवासीका परम्परा, संस्कृति र रहन सहनमा जरा गाडेको हिन्दू धर्मले आजसम्म उनीहरूको संस्कारमा फाटो गराउन सकेको थिएन ।
तर, आजका इसाई धर्मावलम्वी बनेका आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो वंश, जाति, आस्था, परम्परा, संस्कार र संस्कृति, टोल, गाउँ त्यागेर इसाइकरण वा धार्मिक मण्डलीको बिस्तारमा जुटेका छन् ।
इसाइकरणप्रति आदिवासी जनजाति अगुवाहरू एक शब्द नबोल्नुले उनीहरूले भन्ने गरेको पहिचान उनीहरूका लागि मञ्च बन्ने आधार मात्र बनेको छ ।
शासकहरु किन धर्मनिरपेक्षता चाहन्छन् ?
सत्ताधारीहरूलाई इसाई मुलुकहरूसँग जोरी खोजेमा आफ्नो सत्ता र भोगमा असर पर्ने र बाँकी जिन्दगी इसाई मुलुकहरूमा सेटल हुन गाह्रो पर्ने बुझेकाले धर्मनिरपेक्षतालाई ब्यालेन्समा राख्न चाहन्छन् । केही महिना अगाडिमात्र बेलायती राजदुत एण्डि स्पाक्र्सले उनीहरूलाई सम्झाइसकेका छन् ।
कमल थापालाई पनि धर्मनिरपेक्षता नै ठीक
धर्मनिरेपक्षताको बहस यति पनि नचले कमल थापालाई राजनीति गर्ने ठाउँ कसरी मिल्छ ? धर्मका नाममा राजनीति गर्न जति सजिलो हुन्छ, भोलि यसले निम्त्याउने परिणाम सुल्झाउन त्यति नै कठिन हुने निश्चित छ ।
वास्तवमा हिन्दू राज्यको माग नेपाली जनताले हिजो पनि गरेका थिएनन र आज पनि गरिरहेका छैनन ।
हामीलाई चाहिँ के ठीक, के बेठीक ?
धर्म समूदायलाई चाहिने हो । समूदायले राज्य चलाउने हो । भारतमा धर्मनिरपेक्ष राज्यभन्दा भन्दै मुसलमानले चारचोटि विवाह गर्न पाउने कानुन बन्यो ।
त्यहाँको कानुन मुसलमानको धार्मिक कानून सारीयाबाट प्रभावित हुन पुग्यो । हाम्रै देशमा पनि आजसम्म पनि देवानी कानूनहरू कुनै पनि जातिका प्रथाजनित कानूनहरूबाट प्रभावित छन् । अन्तरिम संविधानले धर्म निरपेक्षताको घोषणा गरे पनि मन्दिर, गुठीका जग्गामा बसोबास गर्नेहरूले पूर्जा पाएका छैनन् ।
राज्यले कानूनको नजरमा सबै जातजातिका आस्था, धर्महरू समान छन् भन्ने बोध दिलाउन संविधानमा बहुधार्मिक राज्यको उल्लेख गरे पुग्छ । ऐन, कानूनहरूमा, राज्यले अँगालेका प्रतीकहरूमा, चाडपर्वहरूमा, सरकारी विदाहरूमा, पाठ्यक्रमहरूमा जातीय तथा सामाजिक विभेदहरू देखिनुहुँदैन । बहुबली, सम्भ्रान्त र शासक भएको घमण्डमा यस्ता संवेदनशील कुराहरूलाई ध्यान दिइएन भने राष्ट्रियता भाँडिन्छ ।
Item Reviewed: इसाइकरणले यसरी फुटाउँदैछ आदिवासी जनजातिलाई Rating:5Reviewed By: Amrendra yadav
नेपाल बार एसोसिएसनको पुर्व अध्यक्ष श्याम किशोरि मल...
सिरहामा गोलि चल्यो एकको मृत्यु एक धाइते
मधेसी मोर्चाको आन्दोलन गाउँ गाउँमा
मधेसी मोर्चाको आन्दोलन गाउँ केन्द्रित
करेन्ट लागी युवकको मृत्यु
यी हुन अमेरिकाबाट ल्याइएका बोका र बाख्रा (फोटोसहित...
सप्तरीको भारदह पूर्ण तनाब
कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा आगजानी (फोटो फिचर)
झोलामा के छ ?
तीन जिल्लाका सभासदले भने-हामी मधेसमा जाँदैनौं
अन्तिम सोमवारी पनि धुमधाम साथ मनाईयो
कुवेतबाट आदिवासी जनजातीको खबरदारी
अदालतबाट भ्रष्ट र नैतिक पतन भइसकेको व्यक्ति पुन अध...
मधेशका विभिन्न स्थानहरुमा गरिएको मसाल जुलुसमा ( फ...
नगरवासीद्वारा जलेश्वर नगरपालिकालाई निकम्माको उपाधि...
मधेशी सभासदहरुलाई संविधानसभा त्याग गर्न थरीथरीका द...
मोदीको ट्वीटबाट थाहा भयो नेपालका प्रधानमन्त्रीको ज...
आन्दोलन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
सुर्खेतमा ११ बजेदेखि ६ बजेसम्म कर्फ्यू
प्रहरीले गरेको दमन (भिडियो सहित)
कलमा पानी खान गएका मजदुरको करेन्ट लागेर ज्यान गयो
प्रहरीको गोलीबाट दुईको मृत्यु, ८ घाइते, प्रहरीलाई ...
कावरियाहरुको शव पोष्टमार्टका लागि जनकपुरमा ..........
खुद्रा व्यापारीले मूल्य हेरफेर गर्न नपाउने, सबै सा...
काठमाडौंमा जीवन धान्न महिनामा १७ हजार
एसियाली किक बक्सिङमा नेपाललाई १८ पदक
उदयपुरका युवकको मलेसियामा मृत्यु
थरुहट राज्य माग्दै अनिश्चितकालीन बर्दिया बन्द
पूर्वको पशुपतिनाथका नामले परिचित झापाको अर्जुनधारा...
लाहोरको बाहरी इलाकामा घाममा मकै सुकाउँदै एक पाकिस्...
भूकम्प आउँदा केही सभासद भागे, सभाध्यक्षको कुर्सी ह...
महोत्तरी बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरुकाे शव पोष्टम...
महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका १२ मा पर्ने टुटेश्वर...
२१ औ विश्व आदिवासि दिवस नयाँ बानेश्वर को बिच बाटोम...
प्रादेशिक संरचना सम्बन्धमां सहमतिकाे विराेधमा अाज ...
नयाँ कार्य समिति चयन गर्दै एकता होटल तथा गेष्ट हाउ...
किन झुक्यो नजर तिम्रो ?
एकै जातका व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न न...
पहिलोपटक प्रभू बैंकको नाफा एक अर्ब, कति देला बोनस ...
अमरेशको खुल्यो बास्तविकता, ‘काँग्रेसकै प्रभाव कायम...
मनीषाको श्यामश्वेत चेहरे
नेपाली टोपीमा विकीमिडिया सस्थापक
आमिरलाई अफर गरिएको थियो ‘बजरंगी भाइजान’
एउटै चित्र १० लाखमा बिक्री
सङ्घीयतामा कुरा मिल्यो, मध्यरातमा हस्ताक्षर
हतियार पन्छाएर मोवाइल खेल्दा...
जनताका प्रतिनिधि माधवकुमार नेपाल कहाँ छन् ?
एसएलसी उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही
‘हामी त बिग्रियौं, अब माओवादी त्यस्तो नहोस्’
नेपालका पूर्व सितोरियो खेलाडीलार्इ अमेरिकामा गोल्ड...
दुई दर्जन घरपरिवार पहिरोको त्रासमा
यो हो नेपालको एक मात्र रेलवे सेवा त्यो पनि बर्षै द...
मेसिनमा च्यापिएर नेपालीको मृत्यु
मिथिलामा मधुमास सुरु
शिरिषले पनि बनाए राष्ट्रिय कीर्तिमान
सरकारी कार्यालयले कर तिरेनन्
एनबी बैंकले ७९ करोड कमायो, कति देला लाभांस ?
निखिल भन्छन्-‘चलचित्र क्षेत्रमा अरुकै ईर्ष्र्या गर...
चितवनलाई बेग्लै प्रदेश बनाऔं
विदा हुन लागेका राष्ट्रपतिको किन हुँदैछ विरोध ?
पानी माग्दै मलंगवामा प्रदर्शन
मधेसी नेताले भने-मधेसीको अधिकार खोसिएको संविधान मा...
दुबर्इमा म्युजिक भिडियाेमा खेल्ने प्रतिभा खोज्दै क...
यसरी बन्ने भयो ६ प्रदेश
सञ्जय साहलाई थुनामै राख्ने आदेश सदर
पाठेघरबाट निकालियो ७ किलोको ट्युमर
जनकपुर बमकाण्डको मिसिल सर्वोच्चमा
ट्याक्सी चालकको भाषण : प्रधानमन्त्रीमा निवेदन खोल,...
मुलुकको राजनीति विग्रिएकोमा चिन्तित छन् परदेशिएका ...
विन्डोज १० को सुरक्षामाथि शंका !
पुरक परिक्षा अाजदेखि सुरू
अगामी संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर नाराका स...
हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै जनकपुरको साधु सन्तले गर...
कसले भडकाउन खोजे जनकपुर ?
महोत्तरीको बर्दिवासमा सोमबार अस्पतालमा उपचार गराए...
राष्ट्रपतिले सीमा नाघेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने...
हवाइ भाडा घट्दै, सार्वजनिक सवारीको भाडा नघट्ने
धनुषाका युवा वैज्ञानिक झालाई युवा प्रतिभा सम्मान
डोमलाई इनार छुन नदिने जब पुरै गाउँ उल्टियो
उनन्चालिस वटा उच्च मावि खारेज
आज श्रावणको तेस्रो सोमबारी । धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ...
तराईमा बढ्दो अपराध
नवनियुक्त अध्यक्ष चौधरीले कामकाज सम्हाले
जानकी मेडिकल कलेजमा पठनपाठन सुरु
अस्पतालमा सर्पदंशको विरामी बढ्दै, औषधी अभाव
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन जनकपुरमा प्रदर्शन हु...
पहिलो पटक खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घट्यो
बाँकेका प्रहरीलाई कम्प्यूटर तालिम
म स्वदेश माग्छु
अमेरिकाका नेपालीले बीपीलाई सम्झिए
ग्यास सिलिन्डर पड्केर महिलाको मृत्यु
नक्कली खाता खोलेर विद्यालयको १९ लाख ठगी
कानुनको अभावमा सडकमा गाई
लागत नहुँदा ऐतिहासिक सम्पदा चोरिने डर
राष्ट्र बैंकमा पनि डिभि, पिआर लिन बन्देज लगाइँदै
हावामा यसरी उडे १६४ मानिस, बन्यो विश्वकिर्तिमान (भ...